Basola ukuphekwa komphumela weBafana - Ilanga News
Home Ezemidlalo Basola ukuphekwa komphumela weBafana
Izikhulu zeSafa zithi lokhu kubukeka kuhlangene nabagembuli
UMENGAMELI weSouth African Football Asso-ciation (Safa) uDanny Jordaan (osesithombeni) usola isandla esinoboya ngoku-hlulwa kweBafana Bafana yi-Ghana ngo-1-0 emdlalweni wokugcina wamaqoqo wokuhlu-ngela iNdebe yoMhlaba ezokuba ngonyaka ozayo eQatar, obungeSonto ebusuku eGhana.
UJordaan utshele abezindaba izolo ngoLwesithathu ukuthi ngendlela izinto ezenzeke ngayo kulo mdlalo, sekuyabacacela ukuthi unondweba zonke izinqumo abezithatha beziphekwe ngaphambi komdlalo.
Uthi okubadida kakhulu wu-kuthi ababhejayo bebematasa ngesikhathi esisodwa kulo mdlalo weGhana neBafana, futhi besho into eyodwa ukuthi kumele yenzeke. Uthi bazibuza ukuthi bese baze kanjani?
“Kuningi esikuzwile ngemuva kwalo mdlalo okukhombisayo ukuthi bekukhona okuthile obekwenziwe ngabanye ebebefuna kunqobe iGhana kumnyama kubomvu. Phakathi kokunye esikuzwile wukuthi uma iGhana ibiguqa kulo mdlalo, bekuzokuba nenkinga kumengameli wakhona. Siyazibuza ukuthi konke lokhu kungenaphi ebholeni? Kuyacaca ukuthi luningi ucwa-ningo olwenziwe ukubheka isisindo salo mdlalo ngabantu bangaphandle.
“Kumele sibenze ubulungiswa, sibonge uHelman Mkhalele nomqeqeshi uHugo Broos ngokwenza umsebenzi oncomekayo ngesikwati sethu, siphoxwe wukubanjwa inkunzi ingcaca nje singekho isidingo.
“Yingakho ngibone kungcono ukuba uTebogo Motlanthe aqhubeke nokufaka isimangalo ngemuva komdlalo kwazise besibhekene nezimo ezinzima nxa zonke. IFifa ithathe isinqumo sokuqasha inkampani iSports Radar ukuhlaziya yonke imiqhudelwano yeCaf neyeFifa ukuze kubhekwe konke okwenzekayo ezinkundleni.
“Thina silwela ubulungiswa kuphela, lo mdlalo ubuphekiwe ngandlela thize, kumele iFifa ikuphenye lokho. Konke sesikuyekele kwiFifa ukuthola izimpendulo. Kucacele ngisho ingane encane ukuthi unondweba ubenzelela kulo mdlalo,” kusho uJordaan.
Previous articleUbhoboka ngokuhlukumezeka othandweni owoKhozi FM
Next articleKuvela okushaqisayo ngokufa kukaMeyiwa